Ciidamo Lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Magaalada Cadan Ee Wadanka Yemen.
Tuesday November 14, 2017 - 16:13:28 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weerar aad u xooggan oo lagu qaaday saldhig ciidamo katitsan xukuumadda dabadhilifka Yemen ay ku leeyihiin magaalada Cadan ee dhacda Koonfurta wadankaasi.
Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan istish-haadi ah uu ku qarxay saldhig melleteri oo maleeshiyaadka alxizaamul amni ku lahaayeen Cadan oo ah magaalada 2-aad ee ugu weyn wadanka Yemen.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen jugta qarax weyn oo ka dhashay gaari gudaha ugalay saldhigga oo xilligaas ay ku kulansanaayeen saraakiisha Maleeshiyaadka ay tababartay dowladda dabadhilifka Imaaraatka carabta, wakaaladaha wararka ayaa sheegay in qiic iyo uura madoow cirka isku shareertay kadib markii uu qaraxu dhacay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah uu soo gaaray ciidamada alxizaam ee weerarka lagu qaaday, ciidamadan ayaa ah kuwa qaab ashahaadda ladirirnimo ay utababartay dowladda dabadhilifka Imaaraatka carabta waxayna caan ku yihiin fulinta howlgallada raafka ah ee ka dhanka ah dadka muslimiinta ee ku eedaysan ku lug lahaashiyaha waxa Argagaxisada loogu yeero.
Magaalada Cadan oo ah caasimadda 2-aad ee wadanka Yemen waxay xarun u tahay xukuumadda dabadhilifka Yemen iyo taliska ciidanka imaaraatka ee qeybta ka ah xamlada saliibiga ee lagu qaaday muslimiinta Yemen sidoo kale magaalada waxaa dhowr mar ka dhacay weeraro lagu laayay askar iyo saraakiil.